Tifo letibangwa esimiso senhliziyo nemithambo yegazi, zokugula sokuhamba kwegazi anesikhundla okuholela izibalo yezokwelapha emhlabeni wonke. inani labantu abaphethwe izifo inhliziyo, sikhulela njalo ngonyaka. I okusezingeni eliphezulu lokufa kuthiwa kubangelwa izinto eziningi - ekudleni, ukungabi ukucindezeleka, ukungcoliswa kwendawo ezungezile isici zofuzo.
Phakathi izifo zenhliziyo kukhona ezinkulu senhliziyo futhi unomfutho wegazi ophakeme (high blood pressure). I imfuneko esemqoka sokuthuthukiswa lezi izifo kuyinto hypercholesterolemia, olubizwa nangokuthi hyperlipidaemia. leso sici yesifo ngokuvamile kutholakala ukuthuthukiswa eziphambili add.
Cholesterol - okuhle noma umonakalo?
odokotela abaningi kakhulu eminyakeni eyishumi edlule, imbangela kuphela yesifo senhliziyo sasibhekwa njengophawu lokuthi cholesterol ukungalingani emzimbeni. Namuhla, ngemva ucwaningo kakhulu kanye nobufakazi, kwaba sobala ukuthi umzimba ogulayo futhi athambekele ukuthuthukiswa isifo senhliziyo kudingeka ukuqapha hhayi kuphela lengenako amazinga cholesterol, kodwa triglyceride futhi phospholipids, futhi lipoproteins, okuyinto musa ukudlala indima ebaluleke kunazo zonke ekuqinisekiseni ukusebenza abushelelezi senhliziyo Isimiso semithambo yegazi.
Abathwali esemqoka salezi zici namanje lipoproteins kukhona emzimbeni womuntu. Basuke ihlukaniswe LDL - ongaphakeme-ukuminyana Esilula zithutha cholesterol emangqamuzaneni; VLDL - lipoproteins density aphansi kakhulu, okuyinto ezokuthutha triglyceride; HDL - lipoproteins ethutha cholesterol kanye phospholipids.
LDL futhi VLDL cholesterol udluliselwa amaseli izicubu nokuningi ngilibeke phezu Imithambo yegazi, kodwa HDL ayikuvumeli ukuba ihlale lapho.
Ngakho, iyisici sokuqala ziyingozi, kanti eyesibili - ewusizo. Ngakho-ke, isifo senhliziyo imbangela ayixhomekile ohlwini lwezikhombo cholesterol. Ngokwezinga elithile kuyazuzisa umzimba womuntu ngokuthi ingxenye ilungelo izinqubo umzimba. You azi ukuthi njengoba isikhathi umzimba wethu uqobo ukhiqiza cholesterol, futhi izinto eziningi ezinkulu kuno umuntu ubamba ekudleni.
Ngenxa lokhu okutholakele, odokotela baqala ekwelapheni izifo zenhliziyo ukunciphisa hhayi izinga cholesterol egazini, futhi ilawule ukungalingani okungavamile phakathi LDL, VLDL futhi HDL, okungukuthi, zivimbela kuqala bese andise yesibili.
I ukungalingani ibizwa ngolimi yezokwelapha lipid iziyaluyalu. Nokusingatha kungenzeka esebenzisa izidakamizwa, hypolipidemic kufakwe iqembu.
Lipid kusho - kuyini?
Imakethe ezithaka imithi ekhuluma ngokuphila komndeni isinikeza eziningi izidakamizwa lipid-ukwehlisa. izidakamizwa lipid-ukwehlisa - yizidakamizwa kujwayeleke izinkomba of lipid umzimba. Kanjani? kanjani ejenti lipid-ukwehlisa, okungukuthi, yini lo mshini imiphumela yabo emzimbeni womuntu esiguli, zichaziwe ngezansi.
ejenti Ikakhulukazi lipid-ukwehlisa
Leli qembu kuhlanganisa izidakamizwa lamadigri kahle obuhlukahlukene. Bona ngokuyinhloko kuthinte cholesterol jikelele, ukunciphisa, kodwa ngesikhathi nginakekela efanayo umzimba zilungisiwe olinganise LDL futhi HDL.
Ukutadisha hypolipidemics, izenzo add-indlela, ikakhulukazi, kuba sobala ukuthi cholesterol ukunciphisa Inkomba ibangelwa izinqubo unyathela amabhuleki obhekene ukumuncwa yayo esiswini, eyenziwe okunamafutha acid ukukhululwa isithiyo adipose kusebenze izinqubo cholesterol catabolism futhi ezivimbela lipid zamagama esibindini .
izindlela ezehlukene zokwenza lokhu kwethonya ezingeni cholesterol okuhle nokubi kukhona isici esiyinhloko zomuthi, kuye ngokuthi lapho zifakwe subgroups ezithile izidakamizwa lipid-ukwehlisa. Lokhu kuzoxoxwa ngakho ngezansi.
Ukukhethwa kwe-izidakamizwa ethile yokwelapha kuncike hlobo hyperlipoproteinemia sitholakale. Ngakho, ukuhlukanisa emihlanu izinhlobo: okokuqala kukhona ukwanda cholesterol egazini, kanti eyesibili - ukwanda LDL, kwathi omunye - ukubukeka lipoproteins okungavamile, kuyilapho sesine - anda VLDL, kuyilapho yesihlanu - ukwanda cholesterol kanye VLDL.
Esimweni ngasinye eyinkimbinkimbi enikeziwe yokwelapha ethile.
ejenti Hypolipidemic kubuye kusize ekuvimbeleni izifo eziyinkimbinkimbi senhliziyo, ikakhulukazi isifo sokuqina kwemithambo yegazi kanye senhliziyo ukuhlaselwa. Ukusetshenziswa le mithi umkhuba iye yasiza ekunciphiseni inani lokuhlongakala hlangana kubantu abaphethwe izifo zenhliziyo nemithambo yegazi. Iningi ubufakazi-kumila izinkanyiso yezokwelapha ukuqinisekisa iqiniso lokuthi izidakamizwa lipid-ukwehlisa kukhona ekwelapheni nomfutho wegazi ophezulu zasezindaweni ezihlukahlukene.
Imithi yaleli qembu Sekuyisikhathi eside kusetshenziswa emazweni ase-European ukuyiqeda isifo senhliziyo, ngesikhathi emakethe yasekhaya, zingabantu empeleni esasisesisha, futhi eziningi kuzo ungaqiniseki.
Namuhla ungakwazi ukuthenga izidakamizwa lipid-ukwehlisa, kokubili ukukhiqiza ezifuywayo angaphandle. Njengoba kungewona wonke yabantu abagulayo waphawula esibonelweni esifanayo uphethwe, umuntu ngamunye uthola nomhlahlandlela isicelo umuthi ezithile kusuka iqembu ecacisiwe.
Uma sicabangela generalized izidakamizwa lipid-ukwehlisa, indlela izenzo zaso kucacile. Nokho, izidakamizwa ngamunye inezici ayo ethize. Ngaphambi echaza kubo, ake sibone ukuthi ukusabalalisa lipid-ukwehlisa izidakamizwa ngezigaba, eyenziwe ochwepheshe abanolwazi.
Ngakho, edayiswa Pharmacy yesimanje imithi ezithinta amazinga cholesterol emzimbeni zingahlukaniswa zibe izinhlobo ezintathu:
- cholesterol bawuphundle reserves kwesibindi, ezivimbela inqubo ukumuncwa emathunjini yalo;
- ezivimbela synthesis lipoproteins;
- kuyashesha izinqubo lipids umzimba deducing kusuka emzimbeni.
Uhlobo lokuqala Bile acid sequestrants. Esesibili - statin, fibrates, nicotinic acid. Eyesithathu - "Probukol" cholagogue amalungiselelo.
Njengoba kuphawulwe ngenhla, hypolipidemics - eqenjini elithile ejenti uyakwazi okwandisa khona cholesterol enhle futhi zivimbele elimazayo.
Bile acid sequestrants: izibonelo isici
ejenti lipid-ukwehlisa lesi iqeqebana ngezizathu kwemithi kukhona anion exchange inhlaka. Ziqukethe ukubunjwa yabo i-elementi ezifana ion chlorine. Hhayi ugxile emathunjini, wenyuselwa esikhundleni chlorine Bile acid kanye outputting kubo ngokwemvelo.
Kusukela yokuntuleka acid Bile kwenzeka emathunjini, amafutha kabi amuncwa umzimba, ezihlanganisa OAmaKristu cholesterol emathunjini ukumuncwa inqubo. Ngakho, umzimba uqala ukuphendula ukuntula kwayo eveza futhi HDL, okuyinto ezokuthutha cholesterol kusuka imithambo yegazi esibindini.
Isibonelo sequestrants abanjalo bangabaphostoli imithi njengoba "Cholestyramine" futhi "colestipol" futhi "Holestid".
Statin: izibonelo isici
Lokhu lipid-ukwehlisa ejenti, lo mshini wezenzo esebenza nge ukuvimba enzyme uhlanganyela zamagama cholesterol. Zakha nemibandela ukuncipha eziphawulekayo hepatic cholesterol ukukhiqizwa kabusha, lapho kukhona ukuncipha igazi okuhlushwa.
Kukholakala ukuthi iyona statin kungavimbela ukumelwa inhliziyo nokushaywa unhlangothi. Le mithi cholesterol ephansi nje kuphela, kodwa ukunciphisa futhi ngempumelelo ukuvuvukala izitsha. Diluting egazini, zivimbela ukuthuthukiswa isifo sokuqina kwemithambo yegazi, dilates imithambo yegazi ngesikhathi izingcindezi ephakeme, ukuthuthukisa ukuzinza yayo okusheshayo. Ungavumeli zingcwecwe atherosclerotic zikhule.
Futhi, statin - izidakamizwa lipid-ukwehlisa, okuyinto ahlukaniswe ukusebenza kwabo kwaze kwadlula izizukulwane ezine.
-Lokuqala isizukulwane statin kuthinte izinga ukwehlisa cholesterol egazini buthaka kunoMbuso izidakamizwa entsha. Imithi "Lovastatin," "Simvastatin", "Pravastatin" basonta kuleli qembu izidakamizwa. Basuke ikhiqizwa penicillin akuzange kusize fungal futhi ezibhekwa zemvelo wolimi.
lesibili isizukulwane statin - umuthi kokuba nokunwetshiwe mshini wezenzo emzimbeni womuntu isiguli ngenxa emakamu anda isithako esisebenzayo egazini. umuthi ngibaphathisa "Fluvastatin."
wesithathu statin isizukulwane - yisihumusho ngcono izizukulwane lokuqala nelesibili, elawula ezimbi cholesterol ukulinganisela omzimba kahle, futhi kunciphisa lizinga triglyceride. Isibonelo ezivamile ukhonza izidakamizwa "atorvastatin".
oyisizukulwane sesine statin - lokhu kwakwenqatshelwe, cishe akukho side effects kanye zinezikhathi ukusebenza kahle eliphezulu. Umuthi esemqoka kule iqeqebana - ". Rosuvastatin"
Statin ziyizizukulwane yesibili, yesithathu neyesine kukhona izidakamizwa zokwenziwa imvelaphi.
Yini i-ejenti lipid-ukwehlisa kusukela statin ngempumelelo kakhulu futhi akavumi ukuba yini imiphumela emibi? Okunjalo akuyona phakathi kwabo. Zonke statin bayakwazi kubangele tinkhinga umzimba womuntu side effects ngaphezu ikhono layo eliphezulu ukususa ukuvuvukala semithambo kanye ukususa umzimba cholesterol elimazayo.
ezivame kakhulu futhi eyamukelekayo kodwa kukhona kwesizukulwane sesine statin. Kodwa uma sicabangela iphuzu ukuthi umongo ngamunye kanye nesineke abanomfutho wegazi ophakeme has zabo, ukucinga indikimba yendaba ngazinye isifo kanye nezici ezithile nezinkinga, izidakamizwa kuyabekwa esikhethwe udokotela ukuba khona nje wamukele, ngoba ngakho ufuna isiguli.
Fibrates: izibonelo isici
Lezi hypolipidemics (ngezigaba esabela ukuba iqembu lesine), okuyinto ukubhekana naso ngokuphumelelayo nenkinga ukwehlisa igazi triglyceride futhi LDL. Bona kusebenze Esilula lipase e-plasma bese isibindi. Ngale ndlela LDL wajinge wanamatsela kusukela TG futhi HDL kuthiwa kabusha, futhi ngokukhishwa cholesterol kusukela isitsha.
Naphezu kweqiniso lokuthi ke kuyindlela ephumelela izidakamizwa lipid-ukwehlisa, izici ukuqhathanisa namanye amaqembu izidakamizwa ezifana selukhombisile ukuthi ziphansi ngokuya iwusizo statin.
Izibonelo fibrates yizidakamizwa ezifana "Clofibrate", "Gemfibrozil", "bezafibrate" "Fenofibrate".
Nicotinic acid, izakhiwo zalo
Isikhathi esining impela, ukuphakama komfutho wegazi cores balalela ekhethekile amavithamini. Ake sithole ukuthi le izidakamizwa, vitamin libhekisela izidakamizwa lipid-ukwehlisa. Yilokho kanye okufanayo futhi kukhona nicotinic acid. Its emkhakheni wezokwelapha okuthiwa Vitamin PP noma B3.
Nicotinic acid uzabalaza impahla yayo hypolipidemic esimweni ethola umthamo ezingaphezu kuka kudingwa umzimba womuntu ngokuthi vitamin. Lesi sidakamizwa kuvimbela synthesis VLDL esibindini, ngaleyo ndlela kuncishiswe lokuhlushwa LDL futhi TG, TG futhi ngokwezinga elikhulu ukwedlula cholesterol.
Iziguli kokuthatha lesi imithi ngendlela ngokuqinile kuchazwe umthamo Uchwepheshe nicotinic acid alinakunikezwa ngokuzimela. pass ngamunye ethola ukuwohloka kubabangele ekwelapheni isifo senhliziyo.
Lo muthi kuyinto antioxidant. It is ngokulinganisela nomthelela ekusebenzeni cholesterol okuhle nokubi egazini. Ikakhulukazi, imithi lipid-ukwehlisa isebenza ngendlela kancane ehlukile kunaleyo ngokungaphezulu. Akukona ukwandisa lokuhlushwa HDL cholesterol, futhi kunciphisa ke. Ukwenza kusebenze non-yokwamukela O ezindleleni LDL igazi lapho ithola "Probucol" futhi Ngalokhu izakhiwo hypolipidemic.
Lesi sidakamizwa ngokuyinhloko zokuhlola, kunokuba zokwelapha, kodwa usalokhu isicelo yayo zokwelapha. Abaningi sezindawo "Probucol" ingakamiswa wafunda. It is kahle ibekezelelwe, kodwa ngaphandle ubufakazi obuqinile bokuthi izinzuzo zayo, odokotela namanje uthanda yokunika iziguli zabo kwabanye izidakamizwa lipid-ukwehlisa okwesikhathi eside futhi ephephile ukwelapha kwezempilo.
Noma yimuphi izidakamizwa lipid-ukwehlisa ngempumelelo?
Lesi sihloko sichaza imithi lipid-ukwehlisa. Kuyini, manje kuyacaca. Nakulokhu futhi, le mithi nomthelela nokususwa emzimbeni cholesterol embi futhi ukwandisa lokuhlushwa igazi ezuzisayo. Uma sinqamukile inani lezi izinto, khona-ke isiguli isengozini yinhliziyo, isifo sohlangothi kanye isifo sokuqina kwemithambo yegazi.
I izinkomba esiyinhloko ukusetshenziswa kwezidakamizwa lipid-ukwehlisa - yofuzo i-atherosclerosis, hyperlipoproteinaemia.
Kufanele wazi ukuthi imishanguzo eziyinkimbinkimbi alinikezi yokwamukela kanyekanye izidakamizwa eziningana lipid-ukwehlisa. Inkanyiso Medicine namuhla musa ivelele uquqaba the best lipid-ukwehlisa izidakamizwa. Yezemithi kubo iyahluka kakhulu. Esimweni ngasinye imithi ethile ebekiwe.
Uma sicabanga izinga ngaphambi kokusebenzisa imali leqembu, ukuqiniseka xaxa namanje ukukhiqiza imithi ukwakhiwa angaphandle. Kodwa kuyiqiniso futhi Kuyaphawuleka ukuthi le emakethe yasekhaya manje agcwele zonke izinhlobo imithi ejwayelekile angaphandle ezenziwe, okuyizinto futhi ikhwalithi ngaphansana original. A plus ocacile ukuthi ishibhile.
Akulona izinga okusezingeni eliphezulu enjalo alikho kahle ongaphakeme, futhi kancane-esebenza imithi njengoba enjalo.
Lipid-ukwehlisa izidakamizwa - umuthi ungakwazi ukubhekana high lokufa eqenjini leziguli izifo zenhliziyo, noma beyizidlova ekuthuthukeni kwabo.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi kuyini izidakamizwa lipid-ukwehlisa, izinkomba yokwamukelwa okuxoxwe ngawo ngenhla. Ayisho lutho umthamo othize le mithi, ngoba ngamanye esigulini ngasinye, kuphela ekwabela udokotela emva ukuxilongwa ephelele isiguli.
Befuna izidakamizwa lipid-ukwehlisa abantu ubhekene nesimo lapho kunodokotela ukuncoma ukuze uthole izidakamizwa hepatoprotective. Yini labafanana?
izidakamizwa Hepatoprotective ewusizo ekwelapheni isibindi. Njengoba umphumela lipid-ukwehlisa elihlobene ne izinqubo umzimba, ezibangela cholesterol, futhi lapho kwenzeka esibindini, imithi eminingi hepatoprotective zinezikhathi umphumela lipid-ukwehlisa. Lokhu-ke kusho ukuthi UDC hepatoprotective namanxusa hypolipidemic kungenzeka ezifanayo, ngokuvamile of a ukulungiselela eyodwa okuyinto ulusizo ekwelapheni kanye kwesibindi izifo zenhliziyo nemithambo yegazi.
incazelo echazwa sezindawo lipid-ukwehlisa isizukulwane esisha izidakamizwa nzima njengoba umkhuba reception yabo. Uthole nethonya elihle akusho ukuthi le mikhiqizo ziphephile ngoba isimo jikelele iziguli.
Kasibili wonke amaqembu kanye subgroups izidakamizwa ukuthi babe izakhiwo lipid-ukwehlisa, kungaba nemiphumela engemihle. Main - okwandisa lokuhlushwa ushukela egazini. Ngakho-ke, basuke contraindicated ukuthola iningi labantu abaphethwe isifo sikashukela. Noma kunjalo, iqembu elithile iziguli ukwelashwa ngifundise ngesifo sikashukela uya nokuqokwa lezi. Kulokhu, udokotela ihlola Ukuwohloka ezingaba izingozi nesineke.
Wonke umuntu - is ngamunye wenza umzimba nge izici zayo siqu, ezibekwe njengoba zofuzo nangokwenyama kuluthola. izidakamizwa lipid-ukwehlisa Nobe nguliphi licembu lowo okuxoxwa ngawo ngenhla ngeengaba babelwa iziguli emva ukuhlolisisa isithombe ukuwohloka kwempilo.
Self-kadokotela kwemithi akwamukeleki. abanekhono ezindabeni umzimba udokotela kuphela bangakunikeza iseluleko eqondile mayelana nokuthi yini namanje izidakamizwa eziyingozi empilweni ngesikhathi esithile lesi sifo kwamukelekile ngaphezulu.
Kudingeka nokuba baqonde ukuthi le mithi lingase lithathwe njengendlela yokwelapha esiyinhloko ekwelapheni isifo ezithuthukile, kanye nokuvinjelwa. Esimweni ngasinye inikezwa umthamo othize, okuyinto ethatha kahle emzimbeni womuntu, eseduze kwayo ngenjongo ethile (ekulinganiseni isimo sempilo).
Incazelo izidakamizwa ngalinye ukhombise ukuthi imithi lipid-ukwehlisa kungukuthi kuthathwe ngaphandle izincomo kadokotela. Nokho, umkhuba, ekhawunteni phi of them akukho nobunzima. Ngakho qaphela yisifiso sokwenza zabo kubo. imithi lipid-ukwehlisa Inikezwe ngokuvamile kusho ukuqokwa a unomphela.
Original izidakamizwa lipid-ukwehlisa abadabuka kwamanye amazwe akuzona ephansi isabelomali, ngakho abantu abaningi bazimisele ukuthatha izidakamizwa ashibhile abakhiqizi yasekhaya. Khetha esikhundleni futhi ulungise umthamo Kumele uthole udokotela kuphela adla.
Ukuphumelela nokuvinjelwa kwezifo zenhliziyo nokwelashwa kwazo akuxhomekile nje kuphela esimweni somkhiqizo okhethiwe, kodwa futhi ku ekuphathweni ngendlela yawo efanele, ikakhulukazi, kwi umthamo ehlosiwe, kanye nokuntuleka maqembu ngesikhathi yokwelapha. Hlala uphilile!